admin – Page 13 – Amara News
ထောင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး က ပုဆိုးခါပြခိုင်းပြီး”ဘာပါလဲ”လို့မေးတော့” အဝှါ ” ပဲပါတာလို့ ဖြေခဲ့တဲ့”ချင်း”သူရဲကောင်း NLD အမတ်ဦးဒိုထောင်း(သို့မဟုတ်)သံမဏိရဲတိုက်အိုကြီး
ထောင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး က ပုဆိုးခါပြခိုင်းပြီး”ဘာပါလဲ”လို့မေးတော့” အဝှါ ” ပဲပါတာလို့ ဖြေခဲ့တဲ့”ချင်း”သူရဲကောင်း NLD အမတ်ဦးဒိုထောင်း(သို့မဟုတ်)သံမဏိရဲတိုက်အိုကြီး #ကျဆုံးနှိင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ “ချင်း”သူရဲကောင်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာNLD ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်။NLD အမတ်ဦးဒိုထောင်း(သို့မဟုတ်)သံမဏိရဲတိုက်အိုကြီး အချိန်က ၁၉၉၆ ဇွန်လ။ နေရာက မန္တလေးကျုံးထောင့်မှာရှိတဲ့ထောက်လှမ်းရေး(၁)စစ်ကြောရေးခန်း။”မင်းတို့က ပြည်သူတွေအပေါ်ဒီလောက်ဖိနှိပ်လွန်းတာ။မြန်မာတပြည်လုံးသွပ်ဆူးကြိုးကာပြီး အုပ်ချုပ်ပါလား”အသက် ၆၀ခန့်အရွယ်အဘိုးအိုကစစ်ကြောရေး အရာရှိကိုမကြောက်မရွံ့ ပြန်ခံပြောလိုက်တယ်။ဒီစကားကို ပြောလိုက်သူက၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာကလေးမြို့ …
သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ ပက်သက်သည့် ပျားစွဲခြင်း အတိတ်နမိတ်များ
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ ပျားနဲ့ ပက်သက်သည့် ပျားစွဲခြင်း အတိတ်နမိတ်များ ယခုခေတ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ခေတ်မှီနည်းပညာတွေနောက်ကို လိုက်နေကြတဲ့ အတွက် အတိတ်နမိတ်တွေနဲ့ ပက်သက်လာရင် သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှပါတယ်နော်။ (Zawgyi Code ဖွငျ့ ဖတျမရသူမြားအတှကျ အောကျတှငျ ယူနီကုဒျဖွငျ့ ဖျောပွထားရှိပါသညျ) ချစ်လှစွာသော စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဗဟုသုတရအောင် သိတဲ့သူ အလွန်နည်းလှတဲ့ …
ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ မျောက်ကလေးက လျှပ်စစ်ကြိုးကိုင်မိတာကိုမြင်တော့ ဘဲလေးကပြေးကူညီရင်းနဲ့ ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ငယ်ကတည်းက အတူကြီးပြင်းလာတဲ့ မျောက်ကလေးက လျှပ်စစ်ကြိုးကိုင်မိတာကိုမြင်တော့ ဘဲလေးကပြေးကူညီရင်းနဲ့ ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့ရတဲ့အဖြစ် ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အတူတူကြီးလာတာတဲ့ ဒီမျောက်လေးနဲ့ဘဲလေးက မျောက်လေးကလျှပ်စစ်ကြိုးကိုကိုင်မိပြီးဓာတ်လိုက်တော့ ဘဲကပြေးလာပြီးကူညီပေမဲ့ ဓာတ်လိုက်တာဆိုတော့၂ကောင်လုံးသေသွားကြတယ်။ ပိုင်ရှင်လည်းငိုလို့ ဘေးနားကနေ သံယောဇဉ်ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်တွေမှာလည်း ရှိကြတယ်။ #Crd;photos Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ငယျကတညျးက အတူကွီးပွငျးလာတဲ့ မြောကျကလေးက လြှပျစဈကွိုးကိုငျမိတာကိုမွငျတော့ ဘဲလေးကပွေးကူညီရငျးနဲ့ဇာတျသိမျးမလှခဲ့ရတဲ့အဖွဈ ငယျငယျလေးကတညျးက အတူတူကွီးလာတာတဲ့ ဒီမြောကျလေးနဲ့ဘဲလေးက …
ဆိုင်ကယ်မောင်းသူတိုင်း သိထားရတော့မယ့် ၂၀၂၀ ဥပဒေအသစ်
အခုအချိန်မှာ တောရော မြို့ပါမကျန် ဆိုင်ကယ်ကို အားထားပြီး သွားလာနေကြရတာပါ။ဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုတာက လည်း ပျော်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကားဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခုထုတ်လိုက်တဲ့ ၂၀၂၀ ဥပဒေမှာတော့ ဆိုင်ကယ်စီးသူတိုင်း သိရမည့် အချက်တွေကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေ မသိဘူးဆိုလို့ မရပါဘူး။ ထောင်ပါ ကျသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = …
စိတ်မနှံ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီး ကန့်ဘလူမြို့ လမ်းမပေါ်မှာ လှည့်လည်သောင်းကျန်းနေတဲ့ (ရုပ်/သံ)
စိတ်မနှံ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီး ကန့်ဘလူမြို့ လမ်းမပေါ်မှာ လှည့်လည်သောင်းကျန်းနေတဲ့ (ရုပ်/သံ) Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူခရိုင် ကန့်ဘလူမြို့ပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းပဲ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များတွင် လှည့်လည်သောင်းကျန်းနေပါသည်။ လူပျောက်ရှာဖွေနေကြသော ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိပါက သိရှိစေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဝိုင်းဝိုင်း ကန့်ဘလူမြို့ Credit Kyaw Thu Tun Vedio 1 Vedio 2
အိုးး မေမေရေ အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရသည် အမေစုကို ချစ်တဲ့ မြင်းမူမြို့က မိန်းခလေး (ရုပ်/သံ)
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အိုးး မေမေရေ အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရသည် အမေစုကို ချစ်တဲ့ မြင်းမူမြို့က မိန်းခလေး (ရုပ်/သံ) ဗီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် ကျမတို့မြင်းမူက ရဲရဲတောက်ပါအမေစုကို လေးစားချစ်ခင်သောကျမတို့ရဲ့NLDပါတီလူငယ် ညီမလေး သန္တာစိုးလင်းပါ။တက်တူးဆရာကလည်း မြင်းမူတပင်ရွှေထီးရပ်ကမျိုးကြီးတက်တူဆိုင်ကပါ။ အမေစုပုံတူရေးဆွဲနိုင်တာ တော်လိုက်တာ အချိန် ၄နာရီကြာအောင်ရေးဆွဲရတယ်နာတော့နာတယ်အမရယ်။ အမေစုပုံနဲ့တူအောင်ရချင်လို့သေချာဆွဲခိုင်းတာတဲ့မိဘများကလည်းခွင့်ပြုပေးလို့ သမီးပျော်နေတာတဲ့လေးစားပါတယ်ချစ်သောညီမလေး။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အိုးး မမေရေေ အဲ့ဒီလောကျတောငျခဈြရသညျ အမစေုကို …
ဥစ္စာစောင့်ဆီက ငွေကျပ်ပြားတစ်ပြားရရင် အဲဒီကျပ်ပြားဟာ သုံးလို့မကုန်တော့ဘူး . . တဲ့ ။
ဥစ္စာစောင့်ဆီက ငွေကျပ်ပြားတစ်ပြားရရင် အဲဒီကျပ်ပြားဟာ သုံးလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့။ ဟုတ်လို့လား။ ဟုတ်လို့လား။ မှတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်က ကျွန်တော့်ကို ပြောတာပဲ။ သူ့အစ်ကို ညွန့်ဟန်ကလည်း ပြောတယ်။ ”ဥစ္စာစောင့်ဆီက ကျပ်ပြားတစ်ပြားသာရ။ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ့ မုန့်ဝယ်စားရင် တစ်မတ်စေ့တော့ ချန်ထားလိုက်။ ညကျရင် တစ်မတ်စေ့လေးကို ငွေဖလားထဲထည့်ပြီး ဘုရားစင်ပေါ်တင်ထားလိုက်ကွာ။ မနက်ကျရင် ငွေဖလားထဲမှာ ကျပ်ပြားစေ့လေးကို မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်” ”ဟုတ်လို့လားကွာ” ”ဟုတ်တာပေါ့ကွာ” ”မင်းကော ဥစ္စာစောင့်ဆီက …
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့ ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ။မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား …
“ သား ဖိနပ် မပျောက်တော့ဘူး ဖေကြီး(နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးဝေးပါစေ သားလေးရယ်) ”
“ သား ဖိနပ် မပျောက်တော့ဘူး ဖေကြီး(နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးဝေးပါစေ သားလေးရယ်) ” ဒီသားလေးကိုမှတ်မိကြလားမသိဘူး HIV ရောဂါသည် ဖခင်ကိုယ်တိုင် ဦးဇင်းထံပေးအပ်ပြီး လှည်ကူးကနေခေါ်လာခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်ကပဲ သားငယ်လေးရဲ့ဖခင်ဟာ လူလောကကို လက်ပြနုတ်ဆက်ပြီး အပြီးပိုင်ထွက်ခွါသွားပါပြီ။သားငယ်လေးမှာ အမေရှိပါသေးတယ် အမေရှိပေမယ့်လည်း အမေဖြစ်သူကလည်း ဒီရောဂါနဲ့ပါပဲ။သားငယ်လေးရဲ့ အဖေနဲ့ အမေက တကယ်တော့ ကွဲနေကြတာပါ… သားငယ်လေးရဲ့ အဖေဆုံးသွားကြောင်းကို အမေဖြစ်သူကိုယ်တိုင် …
နိုင်​ငံ​တော်​၏ အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဟားဗတ်မိန့်ခွန်း
နိုင်​ငံ​တော်​၏ အတိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​ ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဟားဗတ်မိန့်ခွန်း ဒီဆုကို ကျမဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေအတွက် အသိအမှတ်ပြုပြီးပေးတာလို့ရော၊ အနာဂတ်မှာ ကျမတို့ ရအောင်ကြံဆောင်ရမယ့်အရာတွေအတွက် အတိတ်နိမိတ်ကောင်းအဖြစ်ပါ ကျမ သဘောထားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ လွတ်လပ်မှုရော၊ လုံခြုံမှုရော ရှိနေပြီလို့ ပြောနိုင်တဲ့အထိရောက်ဖို့ အဝေးကြီးလိုသေးလို့ပါ။ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံခြင်းကို မျှမျှတတရဖို့ ဆိုတာ ဘဝမှာ လူတွေ အတောင့်တဆုံးအရာတွေပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ …